ခက်ဦး – ပ​ဟေဠိ ကွန်ချာ | MoeMaKa Burmese News & Media
ခက်ဦး – ပ​ဟေဠိ ကွန်ချာ
တည့်တည့်ကြီး တွေ ကြည့်ရသလို….
လက်​သီးဆုပ်​ ကျစ်လိုက် ဖြန့်လိုက်
သိပ် … … … … အသဲထိတ်ဖို့ကောင်းတယ် ။
၁၅ . ၃ .၂၀၁၅
(Photo – Facebook Images)